Khasaare dhimasho oo ka dhashay Rabshado ka dhacay Degmada Sylac – SBC
Khasaare dhimasho oo ka dhashay Rabshado ka dhacay Degmada Sylac
Posted by Webmaster on January 9, 2013 Comments
Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay rabshado ay sababeen ciidamada Amaanka Degmada Seylac ee maamulka la baxay Soomaaliland ka dib markii ay rasaas ay kor u ridayeen lagu waaberiistay aroor nimadii hore ee saaka.
Dad banaan bax ahaan ugu horday habeenimadii xalay goob fagaare ah ayaa ay ciidamadu la dhexyimaadeed gaadiid dagaal waxaana halkaasi ka dhashay isku dhac dhexmaray labada dhinac sida uu noo xaqiijiyay mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Degmadaasi Seylac.
In ka badan 12 qof ayaa ku dhaawacmay banaan bax rabshado watay oo dhacay halka hal qof ahina uu u geeriyooday rasaas ku dhacday.
Dhamaan dadka dhaawacmay iyo qofka dhintayba waxaa u sabab ahaa rasaas ay ciidamada Amaanku hoos ugu dhigeen dadka xili uu sii kordhayay banaanbaxa .
Qaar ka ka mid ah Odayaasha Seylac ayaa dusha u saariyay masuuliyada dhacdadan maamulka la baxay Soomaaliland iyadoo markii horeba ay shacabku qabeen doodo ay ka banaan baxayeen taas oo ku aadaneyd maamulka degmada Seylac.
Sikastaba ha haatee Mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Maamulka Soomaaliland waxaa ku soo kordhayay dhacdooyinka noocaan ah taas oo ay shacab tiro leh ugu geeriyoodeen rasaas ay ciidanka Amaanku fureen.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan heleynona waxa ay sheegayaan in dowlada dalkaasi Jabuuti ay xirtay xuduuda Maamulkaasi ay la leedahay dhanka degmada Sylac ciidamo farabadana ay soo dhoobtay.